We.com.mm - Body Shaming လုပ်တဲ့သူတွေကို ပြန်လည်ချေပလိုက်တဲ့ ကမီလာ ကာဘေလို
အခုရက်ပိုင်းကတော့ ကမီလာ ကာဘေလိုဟာ လူမုန်းများနေတဲ့ ဆယ်လီတစ်ယောက် ဖြစ်နေရပါတယ်။ ဘာလို့လဲ? အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ ရှောင်န်မန်းဒက်စ်ကို အပိုင်သိမ်းသွားလို့ပါပဲ။ လက်ရှိဘဲနဲ့ ပြတ်ပြီးတာမကြာသေးဘဲ ရှောင်န်နဲ့ အရိုတစ်လိုင်းလုပ်ပြတာတွေ၊ သူငယ်ချင်းကို ရည်းစားအဖြစ် သိမ်းပိုက်လိုက်တာတွေကြောင့်လည်း အပုပ်ချပြောဆိုမှုတွေ ခံနေရတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တုန်းကလည်း မိုင်ယာမီမှာ ရှောင်န်နဲ့အတူ ကမ်းခြေမှာ အပမ်းဖြေနေပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်လေး မကောင်းပြောခံခဲ့ရပါတယ်။ အဖြူရောင် ဘစ်ကနီဝမ်းဆက် ဝတ်ထားခဲ့တဲ့ ကမီလာရဲ့ပုံတွေဟာ ပါပါရာဇီတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ပျံ့နံှ့သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူမကို မုန်းတဲ့သူတွေက Body Shaming လုပ်ကြပါတော့တယ်။
ဒါကို သူမက ဘယ်လို ပြန်ချေပထားလဲ ဆိုရင် “ကျွန်မကို နာကျင်စေမယ့် အရာတွေကို ရှောင်ချင်တာကြောင့် Social Media ကို လုံးဝမသုံးဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ Havana သီချင်း ၂ နှစ်ပြည့်အတွက် ပုံတင်မယ်ဆိုပြီး ပုံတွေ ပြန်ရှာတဲ့အချိန်မှ သူများတွေ ကျွန်မကို Body Shaming လုပ်နေတာကို မတော်တဆ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်” ဆိုပြီး သူမက အစပျိုးထားပါတယ်။
“ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရရင် ဒီပုံတွေ မြင်မြင်ချင်းတော့ ကျွန်မ ကိုယ့်ဘာကိုယ် မလုံမလဲ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ဟာ! အဆီခဲတွေ! ငါ့ဗိုက်သားတွေ! ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အဲဒီနောက်တော့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာတာက ဟုတ်တာပေါ့။ ဒီပုံတွေက တော်တော်ဆိုးတာပဲ။ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်က ဘာသားနဲ့ထုထားတာမို့လဲ။ ဒါပေမဲ့ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာတစ်ခုက ခုခေတ်ကောင်မလေးတွေ သိပ်လိုချင်နေတဲ့ ခြောက်ပစ်ကင်း သဲလဲစင် ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ တကယ်အစစ်အမှန်မှ မရှိတာ။”
“ကျွန်မဒီစာကိုရေးတာဟာ Social Media နဲ့ကြီးပြင်းလာရတဲ့သူတွေကို ကျွန်မညီအမတွေလို သဘောထားပြီး စေတနာနဲ့ရေးတာပါ။ Edit လုပ်ထားတဲ့ ပုံတွေကိုပဲ တောက်လျှောက်မြင်လာခဲ့ရတော့ ဒါတွေကို အစစ်အမှန်လို့ သူတို့ထင်နေကြတယ်။ အဲလိုနဲ့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ အသားအရေ ဆိုတာတွေနဲ့ အသားကျပြီး ဒါတွေကိုပဲ စံသတ်မှတ်လာကြတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒါတွေက အတုအယောင်တွေပါ။ အတုအယောင်တွေက အစစ်အမှန်လို ဖြစ်လာတာပါ။ ကျွန်မတို့ဟာ မိန်းကလေးတွေကို လက်တွေ့မကျတဲ့ ရှုထောင့်တွေကနေ တိုင်းတာနေကြတယ်။ အမျိုးသမီးအပေါင်းတို့ အဆီခဲတွေ၊ အသားစိုင်တွေဆိုတာ ပုံမှန်ပါပဲ။ ဝ တယ်ဆိုတာလည်း ပုံမှန်ပါပဲ။ အားလုံးဟာ သဘာဝအတိုင်း လှပပါတယ်။” ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Hater တွေ ထိုင်ငိုချင်ငိုလို့ရပါပြီနော်။ Body Shaming လုပ်တဲ့သူတွေလည်း ရှက်တတ်ရင် သေလို့ရပါပြီ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ အလှကုန်စီးပွားရေး သမားတွေရဲ့လက်အောက်မှာ သေပွဲဝင်မှန်းမသိ ဝင်နေရတဲ့သူတွေလည်း ရုန်းထွက်လိုက်ကြပါတော့။ ကမီလာလိုမျိုး ဟောလီးဝုဒ်စတားတစ်ယောက်မှာ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုး ရှိနေတယ်ဆိုတာ လေးစားစရာပါပဲ။ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင်ဖို့ အသည်းအသန် ကြိုးစားနေကြတဲ့ စတားတွေကြားမှာ ဒီလိုလူမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်း ဝမ်းသာစရာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အလှတရားအတွက် ကိုယ် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ အမျိုးသမီးအပေါင်းတို့။ အဆီတွေ၊ အသားဆိုင်တွေဆိုတာ ပုံမှန်ပါပဲ။ အားလုံး သေရင် မြေကြီးထဲ ရောက်မှာပဲ။